तनावमुक्त हुन चाहनुहुन्छ ? हरेक दिन बिहान अप्नाउनुहोस् यी सामान्य उपाय, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
तनावमुक्त हुन चाहनुहुन्छ ? हरेक दिन बिहान अप्नाउनुहोस् यी सामान्य उपाय
एजेन्सी । दिनभरको व्यस्तताका कारण प्राय मानिस वेलुकी आक्रामण हुने गर्दछन्। धेरै जसो अफिसमा बोसको किचकिच र पारिवारीक टेन्सनका कारण यस्तो हुने गर्दछ। यदी तपाई पुरा दिन तनावमुक्त बितोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने बिहान केही उपाय अप्नाउनु भयो भने निकै राम्रो हुने छ। आज हामी तपाईलाई दिनभर तनाव मुक्त बनाउन बिहान गर्नु पर्ने केही कुराका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। भनिन्छ, दिनको सुरुवात बिहानले गर्दछ, त्यसैले विहानको सुरुवात राम्रो भयो भने तपाई दिनभर पनि तनावमुक्त हुन सक्नुहुन्छ।
ताजा हावा घरभित्र आउन दिनुहोस्
बिहान बिहान घरको झ्याल र दिनको ढोका खोलेर सूर्यको किरणलाई स्वागत गर्नुहोस्। पर्दालाई यस्तो गरिकाले लगाएर राख्नुहोस् की बिहान आँखा खुल्नासाथ कोठा घामको किरणले भरिएको होस्। भित्रसम्म केही समयका लागि बिहान पर्दा खुल्ला राख्नुहोस्, यसो गर्दा ताजा हावा भित्र छिर्ने गर्दछ। बिहानको घामको किरणले शरीरलाई मेलाटोनिनको उत्पादन कम गर्न र अड्रेनलिन प्रोडक्सन सुरु गर्ने संकेत दिने गर्दछ। यसो गर्दा तपाई दिनभर फ्रेस र तनाव मुक्त रह सक्नुहुनेछ।
शारिरीक व्यायामले तपाईको पुरा दिन तनाव मुक्त राख्न सहयोग गर्दछ। शारिरीक व्यायाम गर्दा तपाई विभिन्न प्रकारका गल्तिबाट बच्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले हरेक दिन १५ देखि ३० मिनेट शारिरीक व्यायामका लागि छुट्याउनुहोस्। यसबाट एन्डोर्फिन्स हर्मोन सक्रिय हुने भएकाले तपाईलाई दिनभर फ्रेस राख्न मद्दत गर्दछ।
बिहान निकै व्यस्तता हुने गर्दछ। यसका बावजुत पनि तपाई आफूलाई १०, १५ मिनेट समय दिनुहोस्। यसो गर्दा तपाईलाई शान्ति र आनन्द मिल्ने गर्दछ। यो समयमा मन परेमा संगीत सुन्नुहोस्, बुक पढ्नुहोस् । यसो गर्दा तपाई तनाव मुक्त हुन सक्नुहुन्छ।
आलाराम लगाएर सुत्नुहोस्
विहान जुन बेला उठ्ने हो त्यो भन्दा १५ मिनेट अघिको आलाराम लगाउनुहोस्। यसो गर्दा तपाईलाई बिहान स्ट्रेचिंग र सोच विचार गर्ने समय मिल्ने गर्दछ । हडबढीमा ओछ्यान छोड्दा आराम विस्तारै उड्ने गर्दछ र तपाई तनाव युक्त र थकानरहित हुने गर्नुहुन्छ।